Itoobiya oo sheegtay inay diyaar u tahay inay bedesho Ciidamada Seirra Leone ee ka baxaya Soomaaliya | Radio Baidoa
Guriga Wararka Idaacada Itoobiya oo sheegtay inay diyaar u tahay inay bedesho Ciidamada Seirra Leone...
Itoobiya oo sheegtay inay diyaar u tahay inay bedesho Ciidamada Seirra Leone ee ka baxaya Soomaaliya
Dowladda Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday inay ciidamo dheeraad ah u soo diri doonto Soomaaliya, si ay u bedelaan Ciidamada Seirra Leone ee ka baxaya Soomaaliya bisha soo socda ee Janaayo.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalagn ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in ciidankiisa lagu bedelo ciidanka Seirra Leone ee ka baxaya Soomaaliya, hadii codsi uga yimaado Midowga Afrika.
“Haddii uu yimaado codsi nooga yimaado Midowga Afrika, Itoobiya waxay diyaar u tahay inay bedesho ciidamada Seirra Leone ee ka baxaya Soomaaliya”ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya oo warbaahinta kula haday magaalada Addis Ababa.
Ciidamada Itoobiya ee koofiyada AMISOM loo geliyay ayaa ku sugan Gobolada Bay, bakool, Gedo, Hiiraan iyo Galgaduud, waxaana tiradooda lagu sheegay 4,400, balse waxaa horay u jiray in Taliska AMISOM ka war qabin tiro intaas ka badan oo ay Soomaaliya kaga sugan yihiin Itoobiya.
Taliyaha Ciidamada Seirra Leone Mr. Alio ayaa sabtidii sheegay in bisha Janaayo ay ka bixi doonaan Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Kismaayo iyo deegaano ka tirsan Jubooyinka oo ay ku sugan yihiin Ciidanka Seirra Leone, waxaana uu xusay in ka bixitaankooda uu ka dambeeyay markii al waayay ciidamo bedela, kadib markii uu dalkooda ka dilaacay cudurka dilaaga ah ee Ebola.
Itoobiya ayaa horaantii sanadkan si rasmi ah uga mid noqotay howl galka Midowga Afrika ee AMISOM, kadib markii ay si iskeed ah uga sugneyd Gobolada Koofurta iyo Bartamaha Soomaaliya oo labo sano ka hor ay ciidamadeeda soo galeen.